> Resource > Video > Hel MakeMKV Best Kale ee OS X Mavericks
Ma sida la isticmaalayo MakeMKV si loogu badalo DVDs in qaab MKV aad Mac aad? Haddii ay sidaas tahay, waxaa jira wax muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato. Codsiga MakeMKV ma noqon karo la jaan qaada ah Mavericks nidaamka cusub, oo waxaa ku Sugan Calaamad ku jirin in MakeMKV Qalabayn doonaa si ay u taageeraan Mavericks. Haddii aad qorsheyneyso in la rakibo Mavericks, waxaad u baahan tahay in la raadiyo kale MakeMKV wanaagsan Mavericks si aan kugu sameeyo shaqo isku mid ah.
Halkan, si toos ah ayaan ku talin Wondershare Video Converter Ultimate for Mac. Waxa uu awood u leeyahay in laydin sii badalo DVDs, DVD folder, files ISO in MKV on Mavericks ee tayo sare leh oo la xawaaraha ultrafast ah. MKV ka sokow, waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo DVD files si kasta oo qaabab audio & video kale sida AVI, wmv, MP4, MOV, VOB, MPEG, iwm, xataa qalabka la qaadi karo oo kala duwan. Waxa kale oo ay taageerto diinta videos in MKV.
Iyada oo ay taasi weyn MakeMKV Mavericks, waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah inaad ku raaxaysatid noloshaada digital on Mavericks. Hoos waxaa ku Hanuuniye tallaabo-tallaabo in inta badan ku tusaan sida loo badalo DVDs in MKV loo isticmaali.
1 dejinta DVD files si aad u MakeMKV this u Mavericks
Wixii DVD disc ah, waxaad u baahan tahay inaad marka hore gelin darawalka DVD aad. Markaas, abuurtaan app this, iyo dooran "File"> "DVD Load Files" menu inay ku shuban DVD faylasha aad ka darawalka DVD ah. Wixii files DVD nooc kale sida folder DVD iyo ISO, direcly iyaga aad jiidi karaan ka your computer si ay leeg- tahay diinta this app ee.
2 Dooro sida qaab wax soo saarka MKV
Arbushin ilaa liiska soo saarka qaab hoose ee Murayaad this app ee ay halkaas ku dhufatey button arrow double. Next, tag "Video" category, oo guji badhanka arrow xaq u dedeg doorasho MKV ah.
3 Beddelaan DVDs in MKV files
Si aad u billowdo badalo DVDs in MKVs, kaliya riix "Beddelaan" button rukun ee hoose-saxda ah ee suuqa kala. Hadda, waxa aad ka arki kartaa MakeMKV tan kale u Mavericks waa in MKVs diinta DVD aad la soo bandhigay qaab beddelidda bar horumarka. Marka lagu sameeyey, waxaad riixi kartaa fursad u Folder Open sanduuqa pop-up wada hadal, si loo helo kuwaas oo files gediyay MKV.